व्यवसायीक एकता र आर्थिक समृद्धिको लागि मेरो उम्मेदवारीः पुष्पराज कुँवर – || koselinews.com ||
व्यवसायीक एकता र आर्थिक समृद्धिको लागि मेरो उम्मेदवारीः पुष्पराज कुँवर
January 10, 2019 Loksari kunwar Interview, main_news, News, Politics 0
युवा व्यवसायी पुष्पराज कुँवरले कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको पुस २८ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सुदूरपश्चिममा दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय गर्दै आइरहेका कुँवर प्यानलै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि उनको पक्षमा पाका व्यवसायी, युवा उद्योगी, महिला, समाजसेवी लगायतको जनलहर उर्लदो छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यदेखि कोषाध्यक्षको पद सम्हालीसकेका उनी शान्त स्वभाव, मिलनसार व्यवहार र सहयोगी हृदयका कारण आम व्यवसायी र सर्वसाधारण बीच लोकप्रिय छन् । कुँवरसँग पत्रकार रमा भट्टराईले गर्नुभएको कुराकानीका केही अंशः
चुनावी प्रचार–प्रसार कस्तो छ ?
चुनाव आउन तीन दिन मात्रै बाँकी छ । सोहीअनुसार प्रचार प्रसार पनि तीब्र रुपमा भइरहेको छ । भोलीदेखि चुनावी आचार संहिता पनि लाग्दैछ । त्यसो भएको हुनाले आज प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन हो । सबै उम्मेदवार आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नका लागि प्यानलसहित व्यापारीकहाँ भेटघाट गर्नेमा व्यस्त छन् । मेरो टीमका समै सदस्य व्यवसायिक रुपमा परिपक्क र दक्ष भएका कारण समर्थन पनि बढ्दो छ । हामी बाह्य भन्दा पनि भित्री रुपमा टीमलाई बलियो बनाउने र चुनाव जित्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।
व्यापारीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ ?
लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको उद्योग व्यवसाय सम्हालेका, अनुभवी, दक्ष र पाका व्यवसायीहरूको सल्लाह र प्रेरणाले नै मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । अग्रजहरूको सहयोग, समर्थन र मतदाताहरूको चाहानाकै कारण मेरो उम्मेदवारी परेको हुँदा उहाँहरूको सहयोग त पाइन्छ नै ।
प्रसार प्रसारका क्रममा हामीलाई व्यापारीहरूले निकै साथ दिएको पाएको छु । हामी उद्योगी, व्यापारीहरू सबैसंग भेटघाट गरिरहेका छौं । यसअघि वैशाखमा पनि हामीले व्यापारी व्यवसायीहरूलाई भेटेका थियौं । तर, त्यो चुनाव विविध कारणले रोकिएपछि अहिले फेरी हुने चुनावका लागि पनि मतदाताकहाँ पुगेका छौं । उद्योग वाणिज्य संघमा काम गरेको मेरो अनुभव र पहिले गरेको सहयोगका कारण म र मेरो प्यानलप्रति राम्रो माहोल देखिरहेको छु । काम गर्ने समूहलाई नै मतदाताहले जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
तपाई चुनावको बेला मात्रै व्यापारी व्यवसायीलाई भेट्नुहुन्छ कि अरुबेला पनि ?
चुनावको बेला मात्रै व्यापारी व्यवसायीलाई मतलव गर्ने भन्ने हुँदैन । व्यापारी व्यवसायीलाई बेला बेलामा भेट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नु र विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु नै प्रमुख कुरा हो । यहाँका व्यापारीहरूको हकहित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नको लागि कर, भन्सार छुट, बीमा, बैकिंङ कारोबार र आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नु संघभित्र वर्षौदेखि आएको समस्या हो । यी विषयलाई हामीले मध्यनजर गरिरहेका छौं । साथै व्यापारीहरूको तर्फबाट आउने गुनासोलाई सकारात्मक लिदै हाम्रो नेतृत्वको जितपछि यी सबै विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्राथमिकता साथ काम गर्नेमा प्रतिबद्ध छौं ।
तपाईंले अध्यक्षकै लागि दाबी गर्नुको कारण चाहिँ के नि ?
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा तेस्रो कार्यकाल पूरा गरिसकेँ । संस्था चलाउनका लागि धेरै अनुभव हाँसिल गरेको छु । सबै व्यापारीहरूका पीरमर्का नजिकबाट बुझेको छु । ‘व्यवसायीक एकता र आर्थिक समृद्धि’ भन्ने नारालाईसमेत मैले अगाडि सारेको छु । सबै भन्दा पहिले यहाँका व्यापारीहरूलाई एकतावद्ध गरी व्यापार व्यवसायबाट नै समृद्धि गर्ने लक्ष्य छ हाम्रो । सुदूर पश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि विशेष क्षेत्र (सेज), व्यवसायीक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाह स्थापना गर्नका लागि मेरो उम्मेदावारी हो ।
त्यसैगरि संघमा आवद्ध व्यापारीहरूको लागि डिजिटल परिचय पत्रको व्यवस्था, आवद्ध हुने व्यापारीहरूको पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी सदस्यता दिने, व्यवसायीहरूको पीरमर्का बुझ्नको लागि हेल्प डेस्कको व्यवस्था, फोहोर मैला, पार्किङ्ग, शौचालय व्यवस्थापन, बजारलाई व्यवस्थित गर्न सडक बत्ती, सीसी टिभी, प्रहरी बिटको स्थापना, गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नती, कर मैत्रीपूर्ण बनाउने, अनियन्त्रित घरभाडालाई व्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउन पहल गर्नेछु । यी कामहरू गर्नका लागि मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ र मैले जित्नैपर्छ ।
अन्तमा मतदातालाई केही भन्नुहुन्छ ?
व्यवसायी हक, हित र आर्थिक समृद्धिका लागि तपाईंहरूले म र मेरो टीमलाई भोट दिएर जिताउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु । चुनाव जित्नका लागि मात्रै भन्दा पनि केही गरौं र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण आफूले सिकेको ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्न अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँदा तपाईंहरूको साथ, समर्थन र सहयोगको पूर्ण आसा गरेको छु ।